Iyo Fitbit Versa 3 inozopedzisira yatipa yakavakirwa-mukati GPS, asi inozviparadza pachayo ine inokatyamadza nyowani dhizaini sarudzo
Zvakanakira Kutaridzika kukuruKwakavakwa-mukati GPSRinodikanwa skrini Hupenyu hwebhatiri hwakasimbaMabhatani kutsiva kwakashataGPS yekutevera inogona kusimbaMipimo yekuwedzera maapp
Fitbit inoziva chinhu chakanaka kana ichiona imwe, saka hazvishamise kuti iyo Fitbit Versa akazviita kuchizvarwa chechitatu (kana chechina kana iwe uchibatanidza iyo Versa Lite). Iyo kambani yaive ichinetseka isati yaburitsa iyo yekutanga Fitbit Versa, asi iyo inopfeka yakaratidza kuve yakakurumbira zvekuti yakanyatso kusimudzira iyo kambani panguva iyoyo-mureza smartwatch, iyo Ionic.
Iyi yazvino iteration ine kuwedzera kukuru kwekuti mumhanyi wese uye bhasikoro anga achishevedzera ku: yakavakirwa-GPS. Izvo zvinoita kuti ive yechina chete Fitbit yakambosanganisira paneboardboard yekutevera, asi inoita iyo Versa 3 ive-yese uye yekupedzisa-ese evatambi vemuviri?
Fitbit Versa 3 Hutano & Kukodzera Smartwatch ine GPS, 24/7 Yemoyo Rate, Inzwi Mubatsiri & kusvika kune 6+ Mazuva Bhatiri, Pakati pehusiku / Nyoro Goridhe.
£ 199.00 Tenga izvozvi
Fitbit Versa 3 Hutano & Fitness Smartwatch ine GPS, Alexa Yakavakirwa-mukati, 24/7 Moyo Rate, Alexa Yakavakirwa-mukati, 6+ Mazuva Bhatiri, Dema / Dema, Imwe Saizi (S & L Mabhendi Akabatanidzwa)
$229.95 Tenga izvozvi
VERENGA NEXT: Ndeipi Fitbit yaunofanira kutenga?
Fitbit Versa 3 ongororo: Izvo zvaunoda kuti uzive
Iyo Fitbit Versa 3 ndiyo yechina kumisikidzwa kwekambani inonyanya kufarirwa kupfeka mumakore. Uye sezvaungatarisira, Fitbit yakatora mukana wekuti "kana isina kutyoka, usazvigadzirise" nzira: zvinoonekwa zvakada kufanana neshanduro dzakapfuura, iine UI yakafanana nehunhu ku yakatangira.
Izvi zvinosanganisira kuvapo kweAkiel paruoko rwako. Trigger iyo Alexa app kuburikidza nepfupi uye iwe unogona kubvunza mubvunzo wako kune chaiye mubatsiri, uyo anozopindura zvakakodzera mumeseji pachiratidziri. Tichifunga kuti Google iri mubishi kutenga Fitbit parizvino, hazvishamise kuti Google Assistant iri zvakare sarudzo, asi haina kunyatsogadzirira nguva yekuratidzira parizvino, nekambani ichivimbisa rutsigiro mumashure megore.
Kune zvakare kwakagadziriswa moyo-chiyero chekutevera, Anoshanda Nzvimbo maminetsi uye, zvokwadi, yakavakirwa-mukati GPS. Saka kuvandudzwa kwese kutenderera, pabepa zvirinani.
Fitbit Versa 3 ongororo: Mutengo nemakwikwi
Kunyangwe paine kuvandudzwa, ese ari maviri maFitbit Versa 3 uye ayo akaitangira achiri tengesa nemutengo mumwechete pawebhusaiti yeFitbit yepamutemo: £ 199.99. Kunyangwe, zviripachena, kana iwe ukashanya uchikomberedza iwe tsvaga iyo Versa 2 yakachipa kwazvo.
Zvinonzwisisika, izvo zvinoisa iyo Fitbit Versa 3 kumusoro kurwisa iyo Garmin Forerunner 245, iyo nguva dzose inoenda kuchamhembe kwe £ 200 chete, Uye Garmin Vivoactive 3 izvo anowanzo rova ​​£ 150. Ose ari maviri akanaka mawadhi ane Garmin echinyakare laser anotarisa pakumhanya uye kuchovha mabhasikoro.
Uye kana iwe uri mushandisi we iPhone, saka iyo Nhepfenyuro dzeApple 3 ikozvino inonakidzwa zvine musoro £ 200 mutengo poindi zvakare. Varidzi veApple smartphone havafanirwe kuisa, pfungwa.
Fitbit Versa 3 vs Fitbit Sense: Ndeupi musiyano?
Tisati taenda kumberi, zvakakodzera kuratidza misiyano yakakosha pakati peFitbit Versa 3 uye nekambani imwe itsva inopfeka, iyo Fitbit pfungwa. Ose ari maviri anotaridzika akafanana pachiuno, asi iyo Sense inodhura £ 299 kune iyo Versa 3's £ 199.
Kazhinji pamusoro peiyo renji Fitbit - ingave yaSurge ya2014 kana yaIonic ye2017 - yakazvitsaura yoga neGPS yakavakirwa, asi isu tinoziva kuti Versa 3 inayo zvakare, saka uri kuwanei yako yekuwedzera £ 100? Maseru matatu: EDA kuyera kushushikana; ECG kuyera moyo mutinhimira uye imwe yekushisa kweganda.
Izvi pasina mubvunzo zvinopa mamwe emhando-e-matanho matanho asi kana zvese zvauri kunyatsoita hanya nhanho yekutevera uye nzira yekuchengeta tabo pane ako ekurovedza muviri, saka zvakachengeteka kutaura kuti hausi kupotsa pane zvakawandisa. Zvakangodaro, kana iwe uchifunga kuti Sense inogona kunge iri yako, saka ive shuwa yekutarisa Ongororo yakazara yaJon.
Fitbit Versa 3 ongororo: Dhizaini
Ini ndakatanga ongororo iyi ndichiti Fitbit akange akachengeta iyo Versa dhizaini zvakafanana, uye pakatarisa ichokwadi. Asi iyo kambani yanga ichidzikisa zvishoma nezvishoma kuvapo kwemabhatani epanyama: paive nematatu pane echizvarwa chekutanga, uye izvi zvakaderedzwa kuita imwe paVersa Lite uye Ndima 2. Zvino, hapana mabhatani zvachose: ingori indent kuruboshwe-kuruboshwe iyo inoshanda seyakaomarara-inoteedzera "inductive" bhatani senge iyo yakatanga paFitbit Charge 3.
Kana zvirinani zvinofanirwa kuita. Ndakaona zvisingaenderane zvachose nekushanda, uye zvinoita sekunge handisi ndega. Inoita senge nzira inoenderana yekuti bhatani rishande ndeyekutsikirira wachi kubva kumativi ese - uye izvi zvinoita kuti ishande kapfumbamwe kubva pagumi, kunova kusimudzira. Asi nei Fitbit akanzwa kudiwa kwekuchera bhatani rave rakanyatsoteerera pamazera ezvigadzirwa, ini handina zano.
Ini ndinofanira kucherechedza kuti aya ndiwo akafanana dhizaini seFitbit Sense, uye wandinoshanda naye, Jon, anga asina kana nyaya nazvo chero, saka mileage yako inogona kusiyana. Kwandiri, zvakadaro, kurwadza - kunyanya kana iwe ukapinda mune mapfupikisi epamberi (muchina wekudhinda, pombi mbiri, nezvimwewo) izvo zvinofanirwa kuita kuti hupenyu hwako huve nyore, asi mune yangu ruzivo ita zvinopesana.
Zvikasadaro, mumataurirwo mazwi iri kurapa kwakazara. Inotarisa chikamu, iine inopenya 1.58in 336 x 336 inoratidzira zvakanyatsovharirwa mune yakavharwa aluminium yakavharirwa. Ehe, ichine mabhatani akakora akapoterera, asi nekunyengera Fitbit inoona yega yega skrini ine dema kumashure kuitira kuti miganhu isanyatso kuratidza kunze kwekunge iwe uchinyatso kuitsvaga nekunyatso tarisa iyo yekuchinja mifananidzo.
Yakakura zvishoma kupfuura iyo Fitbit Versa 2 (1.4in, 300 x 300) asi ichiri kunzwa kugadzikana zvakanyanya pachiuno, kunyangwe dai ndaigona kuita ndega pasina tambo inosunga mukati mayo pachayo kuti isunge. Fitbit inoita kuti iwe uwedzere mumabhandi ako pachinzvimbo, asi iyo latch mashini ndeyekuti ichafanirwa kunyatso gadzirirwa mudziyo. Pasina kupokana kutarisa kwakanaka kwechitatu-bato sarudzo dzinobuda munguva, asi parizvino sarudzo dzako dzinouya dzakananga kubva kuchitoro cheFitbit, ne mitengo inotangira pa £ 25 kusvika £ 50 nenguva.
Fitbit Versa 3 ongororo: Performance
Quirks eiyo capacitive bhatani parutivi, iyo Fitbit Versa 3 mufaro kushandisa. Kunyangwe iwe usingawani iwo akakura huwandu hwesoftware yakapihwa neApple Watch, sarudzo inowanikwa nekutadza inovhara 90% yezvinhu izvo vanhu vazhinji vachazoda zvakadaro, kusanganisira karenda, mamiriro ekunze uye Spotify (kana Deezer, kana iwe ukaomerera pakutsigira. iyo underdog). Kune mashoma sarudzo ekuwedzera muchitoro, zvakare, kusanganisira iyo Starbucks kadhi, Uber uye Couch kune 5K mudzidzisi.
Izvo zvichiri kushomeka, muUK zvirinani, ndeyeFitbit Pay. Ehe, iwe unogona kubhadhara zvinhu kuburikidza neyako ruoko nemari yekubhadharisa, asi mune zvese mukana iwe unenge usiri kuzviita izvo. Sei? Nekuti iro runyorwa rwemabhangi akatsigirwa rinoramba rakanyanyisa. Kunze kwekunge iwe ukaitika kubhangi neSantander, iyo dzimwe sarudzo dzakanaka niche.
Ehezve, vanhu vazhinji vanouya kuFitbit nezvikonzero zvehutano, uye heino wakachengetwa zvakanaka. Haisi chete iyo inoenderana neyeAppleti app uye webhusaiti zvakanyanya kwazvo goridhe standard (kunyanya nekuti unosungirwa kuve neshamwari, mhuri uye vaunoshanda navo kuishandisa kukwikwidza kurwisa), asi iyo pa-app kugwinya uye hukama hwehutano hwakasimba zvakaenzana.
Pane "Zorora" kwekutanga, iyo inotungamira kufema kwako kwenguva kusvika pamaminetsi gumi. Unogona kutarisa denderedzwa repepuru kuzadza uye kushaya chinhu kuti ufeme kufema kwako kana, kana iwe uchida kuvhara maziso ako, ingonzwa kunze kwekudengenyeka uko kuchakuudza kana yave nguva yekufema nekunze.
Ikozve kune Fitbit Kochi. Izvi zvinokupa iwe munhu akasarudzika, anotungamirwa maekisesaizi paruoko pamwe neakashama madhayeti madhayeti ekukuratidza zvekuita, uye riini. Zvinosuruvarisa, mazhinji eaya akaiswa kumashure kweFitbit's £ 7.99 pamwedzi Fitbit Premium sevhisi, asi iwe unogona tora kuyedzwa kwemazuva makumi mapfumbamwe pane iyo Fitbit saiti kana iwe uchida kuziva.
Ikozve kune chikuru chiitiko: iro rekushandisa app, uye muVersa kutanga, haufanire kuvimba nefoni yako GPS yekutarisa nzvimbo. Izvo zvinoshandiswa zvinouya nemitambo yakawanda yekutevera, nezvose kubva kubhootcamp uye kutenderera kuenda kugorofu uye tenesi. Asi zviri pachena kuti zvakanakira zvinhu uko mashandiro akanyatso kuenderana nekukurumidza kwaunofamba uye kwaunofamba kuenda: kumhanya uye kuchovha bhasikoro.
Saka iyo Versa 3 inoita sei? Nehurombo, iri padiki padanho, kana ichienzaniswa neyangu Garmin 245 pane rimwe ruoko, iro rakaratidza kare kuti rave padhuze nekuona nezviyero zveGPS. Kupfuura katatu kumhanya pakati pe3.5 uye 5km pakureba, iyo Fitbit Versa 3 yaigara iri kumashure kweGarmin muhurefu hwakazara. Haisi pakakoromoka, asi - pakati pe0.07km uye 0.15km inonyara.
Asi - uye hombe asi - uku kuchiri kuvandudzika kukuru paVersa 2. GPS yako yefoni inogona kunge ichinyatsoita kupfuura iyo Versa 3's, asi mune zvandakaona, piggybacking off foni inenge ingori yakaipa nguva dzose nekuda kwehasha mabhatiri ekuchengetedza matanho. uye kubatana kwakashata. Uyezve, izvi zvinoreva kuti unogona kumhanya kana kuchovha bhasikoro usingawane homwe inotsigirana inokwana foni yako. Iko kukunda kukuru, kunyangwe kana tichigona kuita quibble nekururama.
Kurova kwemoyo pakati peFitbit naGarmin kwaive kwakanyatsofanana, kunyangwe isina bhanhire repachipfuva, zvakaoma kutaura kuti vanga vari vese bang pane chaicho, kana kuregedzera. Zvese zvandinogona kutaura ndezvekuti kunyangwe kusahadzika kwaJon nezveyeki-yemoyo yekutarisa muFitbit Sense - imwechete tekinoroji iri kushandiswa pano - inoita zvirinani pamwe neinopfeka pane imwe ruoko.
Sezvakamboita neFitbits, hupenyu hwebhatiri ndicho chinhu chechinhu Apple chaanogona kungorota nezvacho. Iyo kambani inoratidza mazuva matanhatu eiyo Versa 3, uye munguva yangu nayo iyo inonzwa nezve kurudyi, kunyangwe iine mashoma GPS-akateedzera anomhanya anosanganisirwa. Iwe cherekedza, zvisinei, kuti kana iwe ukasarudza kugonesa iyo inogara-iri kuratidza iyi inodonha nezvikamu zviviri kubva muzvitatu kusvika kumaawa makumi mana nemasere. Yakadzimwa nekutadza nekuda kwechikonzero icho, asi zvakanaka kuva nesarudzo.
Fitbit Versa 3 ongororo: Mutongo
Zvese mune zvese, iyo Fitbit Versa 3 idanho rakakura munzira kwayo yekambani inonyanya kufarirwa kupfeka. GPS yainyatso kuve pamusoro pevose vanoda rondedzero, uye nepo isiri yechokwadi seyakavimbika yangu Garmin 245, richiri nyika kunze kwekuvimba nefoni yako. Kune Fitbit yekuwedzera chimiro pasina kuwedzera chero chinhu kumutengo wemutengo ingori nhau dzinopenya.
Chingave chibvumirano chemoyo wese, saka, dai zvisiri zvekambani inosiya rakakodzera, bhatani repanyama pachinzvimbo cheiyi imwe nzira yekumanikidza. Ehe, zvinotaridzika (zvishoma) zvakanaka, asi ndipe chimwe chinhu chinoshanda zvakaenzana uye pasina kupokana nguva dzese.
Nechikonzero ichocho, iyo Fitbit Versa 3 inochengeta iyo ina-nyeredzi chiyero cheyakatangira. Zvinoshamisira kuti kambani inozivikanwa nekutevera nhanho, iyi inyaya yematanho maviri kumberi, nhanho imwe kumashure. Minwe yakayambuka iyo Fitbit inoita iyo iri nyore kwazvo inodiwa gadziriso uye inobvumira iyo Fitbit Versa 4 kuve inopfeka inokodzera kuve.
Garmin UK mawodhi ewachi akatsanangura: Yedu sarudzo yeakanakisa Garmin mitambo wachi yaunogona kutenga